Ubuntu ကို Install လုပ်ပြီးသောအခါ 12.04 Precise Pangolin | Linux မှ
Ubuntu 12.04 တိကျသော Pangolin ကိုသွင်းပြီးသောအခါဘာလုပ်ရမည်နည်း
Ubuntu 12.04 တိကျသော Pangolin ရက်အနည်းငယ်အကြာအလင်းကိုမြင်တော်မူ၏။ ဒီရေပန်းစားတဲ့ distro တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုသကဲ့သို့ဒီမှာအချို့ရှိသည် မင်းလုပ်သင့်တဲ့အရာ တစ် ဦး လုပ်ပြီးနောက် တပ်ဆင် ခြစ်ရာကနေ
8 Ubuntu ဆော့ဝဲလ်စင်တာတွင်နောက်ထပ်အသုံးချပရိုဂရမ်များကိုရှာဖွေပါ
Ubuntu 12.04 ကိုဖြန့်ချိပြီးနောက် Canonical မှဖြန့်ဝေသော ISO ပုံသဏ္withာန်နှင့်ပါသောမတူကွဲပြားသော package အသစ်များပေါ်ထွက်လာနိုင်သည်။
Ubuntu ကိုပြုပြင်ရန်လူကြိုက်အများဆုံး tool မှာ Ubuntu Tweak ဖြစ်သည်။ ဒီအံ့သြစရာကသင့်ရဲ့ Ubuntu ကိုညှိရန်နှင့်သင်ကြိုက်သလိုထားခဲ့ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
MyUnity ကမင်းကို Unity ကိုအလွယ်တကူ configure လုပ်ခွင့်ပေးတယ်။
MyUnity ကို Install လုပ်ပါ
Unity မဟုတ်ဘဲ Gnome 3.2 ကို Gnome-Shell ဖြင့်စမ်းကြည့်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည် Gnome Shell ကိုတပ်ဆင်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါကသင်လည်းစိတ်ဝင်စားပေမည် Gnome Shell 3.2 extensions များကို install လုပ်ပါ.
အကယ်၍ သင်သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီနူးကိုနှစ်သက်ပြီးသင်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိပါက LibreOffice အဲဒါကိုမပံ့ပိုးဘူး၊ ငါ terminal ကိုဖွင့်ပြီးအောက်မှာရေးခဲ့တယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » Ubuntu 12.04 တိကျသော Pangolin ကိုသွင်းပြီးသောအခါဘာလုပ်ရမည်နည်း
ဒါကတကယ်ကိုဂရုစိုက်စရာပါ၊ သင်ဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ပါ။ ငါသည်သင်တို့၏အစာကျွေးခြင်းပူးပေါင်းနှင့်သင်၏အလွန်ကြီးစွာသော post ကို၏အပိုရှာပုံတော်အတွက်မျှော်လင့်ထားကြပြီ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်၏လူမှုကွန်ယက်များ၌သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုမျှဝေထားပါသည်
ကျွန်ုပ်၏ပင်မစာမျက်နှာ :: ဂီတသမား
PIC microchip microcontroller တွေအတွက် C compiler တစ်ခု install လုပ်လို့ရမလားလို့စဉ်းစားမိတယ်
အလွန်ကောင်းမွန်သည့်အကြောင်းအရာ၊ ကျွန်ုပ်သည် cube program ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုသိလို။ ၎င်းသည် alt + tab ကို နှိပ်၍ မျက်နှာပြင်ကိုရွှေ့ပြီးစာသင်ခုံများသည်ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ် cube plz ကဲ့သို့ရွှေ့စေသည်။ jhsantonio@gmail.com
John Jairo ဟုသူကပြောသည်
ထို cube ကို compiz ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းကို synaptics မှတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်သင်၏ဗီဒီယိုကဒ်တွင် 3d opengl သက်ရောက်မှုရှိရမည်။ compiz manager ကိုလည်းတပ်ရမည်။
john jairo အားပြန်ပြောပါ
ဒီစာမျက်နှာကတကယ့်ကိုအံ့သြစရာပါ။ ဒီမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်၏ကြီးသောအသိပညာကို ထပ်၍ ဖြည့်စွက်ပါ။
Carlos Cox ကိုပြန်သွားပါ
သူငယ်ချင်းမေးခွန်း ... Ubuntu ဆာဗာကိုငါ install လုပ်ပြီးပရိုဂရမ်ကတပ်ဆင်ရန်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမရှိသောစာတစ်စောင်ရောက်လာသည်။ ကျွန်ုပ်အခြား link မှဤ link ကိုတပ်ဆင်လိုသကဲ့သို့ -
အက်မင်လမ်းညွှန် (/ var / lib / dpkg /) ကိုသော့ခတ်။ မရပါ၊ အခြားဖြစ်စဉ်အချို့လည်းသုံးနေသည်။
သင်တစ်ခုခု install လုပ်နေစဉ် ubuntu စျေးကွက်သည်မမျှော်လင့်ဘဲပိတ်လိုက်ပြီးတစ်ပြိုင်နက်တည်း program များကိုတပ်ဆင်ခြင်းကိုတားဆီးသောဖိုင်များမဖျက်နိုင်ပါ။
ပြtheနာကိုဖြေရှင်းရန်သင် terminal တစ်ခုဖွင့်ပြီးရိုက်ထည့်ရမည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရာအားလုံး perfectly သွားနေသည်
Ubuntu ကို ဟုသူကပြောသည်
အင်း !! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်သင့်ကိုကောင်းချီးပေးပါလိမ့်မည် (သိကောင်းစရာ - ကားမောင်းသူများ၌ Mass Utils ထည့်သွင်းမှုကိုထည့်ပါ)
Erk mart ဟုသူကပြောသည်
Erk Mart အားစာပြန်ပါ
ဘုရင်များ g ။ pandars ဟုသူကပြောသည်
San Carlos COJEDES VENEZUELA မှမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ၊ ကျွန်ုပ်သည် LINUX UBUNTU သို့မကြာသေးမီကရောက်လာသောအင်စတီကျူးရှင်းအသုံးပြုသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
သူတို့ကအင်္ဂလိပ် - саксонဘာသာစကားပြောတဲ့အတိုင်း။ သင်၏ကောင်းသောအလုပ်ကိုဆက်ထားပါ။
ဘုရင်များအားပြန်လည်ဖြေကြားပါ g ။ pandars
Linux တွင်စတင်နေသောသူများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောစုစည်းမှု၊ ကျွန်ုပ်တွင်မေးခွန်းတစ်ခုရှိပြီး၎င်းသည် Kubuntu အတွက်လည်းအသုံးဝင်ပါကလား။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါသူတို့အခြေခံအားဖြင့်တူညီတဲ့ဖြန့်ဝေမှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ပေမယ့်ပြောင်းလဲစေတဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာကတော့ Gnome အတွက် KDE desktop ဖြစ်သည်။
အချို့သောအရာများမှာအခြားသူများမပါ ၀ င်ပါကအထုပ်များကိုမတူကွဲပြားစွာခေါ်ဆိုခြင်း၊ ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်မကိုက်ညီပါ။ ထပ်မံ၍ မသွားဘဲ ... kubuntu ရှိစည်းလုံးမှုမရှိပါ။
Greetings Friend အမှန်တရားကတော့ကျွန်တော်ဟာ Ubuntu ကို version 12.04 tls နဲ့စတင်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ အသစ်တစ်ခုအတွက် install လုပ်ချင်တယ်၊ disk တစ်ခုလုံးမှာ install လုပ်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ win xp documents တွေကိုသိမ်းထားမယ်ဆိုရင်အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချို့သောစာရွက်စာတမ်းများကိုသိတယ်။
ယောနသန်သည်ရှမွေလသည် Soto Montes ဟုသူကပြောသည်
ငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့သည် !!! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Jonathan Samuel Soto Montes အားပြန်ပြောပါ
အရမ်းကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ့မှာ Ubuntu နဲ့ပြaနာရှိနေတယ်။ OS တောက်ပမှုမရှိဘူး။ ငါဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုငါမတွေ့ဘူးလား။
Andres Florez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ် terminal ကို install လုပ်ရန် flash player ကို install လုပ်သည့်အခါကြည့်ပြီးစကားဝှက်တောင်းသောအခါ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ရေးခွင့်မပြုပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
Andres Florez အားပြန်ပြောပါ
Echazarret @ ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ အခုငါ့ Ubuntu ကတစ်ပြားမှမတက်တော့ Unity ကိုပိုသာယာအောင်လုပ်တယ်။ မင်္ဂလာပါ
Echazarret @ ကိုစာပြန်ပါ
jaime melara ဟုသူကပြောသည်
jaime melara အားပြန်ကြားပါ
လေ့လာသူများအတွက်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖြစ်နိုင်သောအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒီအသိုင်းအဝိုင်းကိုသင်ပေးအပ်သည့်ကြီးမားသည့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမြင်ယောင်ရန်ခက်ခဲသည် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!!
ရိုးရှင်းစွာသိသာထင်ရှားတဲ့, ထိုအလှူငွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!
သင်တစ် ဦး makina များမှာ !!!
ubuntu 12.04 ဟုသူကပြောသည်
repositories ဒီတော့ "updated" မတည်ငြိမ်မှုကိုဖန်တီးသူတို့သုံးလတစ်ကြိမ် OS ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှမကိုက်ဘူး
ubuntu ကိုပြန်ကြားချက် 12.04
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ရွှင်လန်း! ရှင်ပေါလု။
နောက်ဆုံး sudo rm -rf /
ဤသည် bullshit သင့်လျော်သောလူများ၏ asshole မှတ်ချက်များဖြစ်ကြသည်။ သင်မသိသောသူများအတွက် root system ကိုရှင်းပေးသောကြောင့်ဤ command ကိုဘယ်တော့မှမရိုက်ပါနှင့်။ ဦး နှောက်ကိုဝယ်ပါ။
Miguel နိမိတ်လက္ခဏာများ ဟုသူကပြောသည်
ကြီးစွာသောအကူအညီ !! ငါ codec ကြောင့် ubuntu နှင့် mint အကြားတွန့်ဆုတ်ခဲ့သည်, ကျိန်းသေ ubuntu နှင့်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အမှန်တရားကတော့ Ubuntu 12.04 မှာတွေ့ရတဲ့ပြproblemsနာတွေအတွက်ငါအရမ်းငြီးငွေ့နေပြီ၊ Windows ကိုတကယ်မပြန်ချင်ဘူး။
Ubuntu 12.04 ကိုငါထပ်မံ install လုပ်မိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်မှတ်မှာအမှားအယွင်းတွေ (အမှန်တရားကသိပ်မကောင်းဘူး) ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါပြသနာကတစ်ခုတည်းသောအရာက OS 12.04 ကိုထပ်မံတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။ နောက်တဖန် ubuntu အတူ။
ထပ်မံ၍ မအောင်မြင်ပါ၊ အမှန်မှာကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ နောက်ဆုံးအမှားအယွင်းများကိုကျွန်ုပ်ရရှိပါသည်။ (၁) terminal မှ update နှင့် update ကို အသုံးပြု၍ update manager နှင့်မဖွင့်တော့ပါက , Synaptic နှင့် software ကိုစင်တာ။
(၁) W - လက်မှတ်အတည်ပြုခြင်းတွင်အမှားတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ သိုလှောင်မှုသည်နောက်ဆုံးပေါ်မဟုတ်ပါ၊ အညွှန်းဖိုင်ဟောင်းများကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ GPG အမှားမှာ - http://extras.ubuntu.com တိကျသောထုတ်ပြန်ချက် - အောက်ပါကုမ္ပဏီများသည်တရားမ ၀ င်ပါ။ BADSIG 16126D3A3E5C1192 Ubuntu Extras Archive Automatic Signing Key
W: GPG အမှား - http://ppa.launchpad.net တိကျသောထုတ်ပြန်ချက် - အောက်ပါကုမ္ပဏီများသည်မမှန်ကန်ပါ - Florian Diesch အတွက် BADSIG 5AF549300FEB6DD9 Launchpad PPA
W: GPG အမှား - http://ppa.launchpad.net တိကျသောထုတ်ပြန်ချက် - အောက်ပါကုမ္ပဏီများသည်တရားမ ၀ င်။ TualatriX အတွက် BADSIG 6AF0E1940624A220 Launchpad PPA
W: မရနိုင်ပါ http://extras.ubuntu.com/ubuntu/dists/precise/Release
ပိုစတာပြောသည့်အတိုင်းလိုင်း ၅၇ တွင်အမှားအယွင်းရှိသည်
ဖိုင် /etc/apt/sources.list ။
ငါ terminal တစ်ခုဖွင့်ပြီး adminit အထူးအခွင့်အရေးကိုသုံးပြီး gedit ဖြင့်ဖိုင်ကိုဖွင့်ရန်အောက်ပါ command ကိုရေးခဲ့သည် -
ထို့နောက်လိုင်းနံပါတ်များကိုကြည့်ရှုရန်ထို option ကိုဖွင့်ရမည်။ gedit menu တွင်ကြည့်ပါ (ကျွန်ုပ်တွင်၎င်းကိုတပ်ဆင်။ မရပါ၊ မှတ်မိနိုင်မှာမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းမှာ Format menu ဖြစ်သည်) ။
လိုင်းများကိုရေတွက်ပြီးသည်နှင့်လိုင်း ၅၇ ကိုရှာပါ။
အဲဒါကိုကူးပြီးဒီမှာပို့ပါ၊ ဘာမှားလဲဆိုတာသိနိုင်တယ်။ သင်အသုံးပြုနေသော distro နှင့် version ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြနိုင်လျှင်လည်းအသုံးဝင်ပါလိမ့်မည်။
Diego Mahecha အမ် ဟုသူကပြောသည်
Sudo apt-get update ကိုကျွန်ုပ်ပေးသောအခါကျွန်ုပ်ရရှိပါသည်။
အီး: အရင်းအမြစ်စာရင်း /etc/apt/sources.list (dist parsing) ရှိ E: အမှားအယွင်းလိုင်း 57, E: အရင်းအမြစ်စာရင်းဖတ်ရှုနိုင်ဘူး, E: ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသို့မဟုတ်ပွင့်လင်းအထုပ်စာရင်းသို့မဟုတ် status file ကိုမရနိုင်ဘူး။ ' ရှာဖွေခြင်းလိုင်း ၅၇ ကိုမှတ်ချက်ပေးခြင်းသည်အလုပ်မလုပ်ဘဲအချည်းနှီးသာဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်
Diego Mahecha M ကိုပြန်ပြောပါ
နောက်ဆုံးတော့ဒီနှင့်အတူရုန်းကန်ရက်ပေါင်းများစွာ။ Ubuntu 12.04 ISO ကိုသာ download လုပ်ပါ၊ CD မှ boot လုပ်ပြီး OS ကိုတင်လိုက်သည်ကအမှား 12.04 ကို uninstall ပြန်လုပ်ပြီးထပ်မံထပ်မံတပ်ဆင်ရန်အခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးအံ့အားသင့်စရာက bug တွေအားလုံးကိုပြုပြင်တည့်မတ်ပေးတဲ့အပြင်၊ ကန့်သတ်ကုဒ်တွေ၊ Libre Office ရှိဘာသာစကားနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုထပ်မံလုပ်ဆောင်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသောအရာများစသည်တို့အများအပြားပါ ၀ င်သည်။
မင်္ဂလာပါ Gumax၊ ကျွန်ုပ်တွင်အောက်ပါပြhaveနာရှိသည်။ ၎င်းသည်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုလုံးဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏အခြားနည်းလမ်းများ၌ဗားရှင်းတစ်ခုအားအတင်းအကြပ်ပြုလုပ်ချိန်တွင်ဗားရှင်း ၂၉၅.၄၀ နှင့်ဗားရှင်း ၂၉၅.၅၃ ပေါ်လာသော်လည်း ၂၉၅.၃၃ မရှိ၊ ၎င်းကိုမည်သို့တင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်ရှာမတွေ့ပါ။ ၀ က်ဘ်တစ်လျှောက်လုံးရှာဖွေပြီးဘာမှမရှာနိုင်သောကြောင့်သင်၌ဤပြproblemနာကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်ရှိပါသလား။
Uhmmm .. Ubuntu ကိုသုံးတဲ့အခါငါ install လုပ်ဖို့ပိုလွယ်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါဒါကိုအကြံပေးခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့များစွာသောအရာတွေကို configure လုပ်ထားလို့ပေါ့။ ထိုအခါငါ Debian ၏မျက်နှာသာအတွက် Ubuntu ကိုစွန့်ခွာ။ အဲဒါကို configure လုပ်ဖို့အရမ်းခက်ခဲတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ပြောပြတယ်။ Uhmmm၊ ထပ်မံတပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသောကြောင့်လာရောက်သူများအတွက်ဖော်ရွေသောအနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာတစ်ခုတော့မဟုတ်တော့ပါ။ သို့သော်၎င်းကိုစွန့်ခွာပြီးအခြား distro သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းသည်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။
တစ် ဦး ခမ်းနားအလုပ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒီဟာက ၁၀၀% အသုံးဝင်ပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်။
Erick CoPe သို့စာပြန်ပါ
Ubuntu 10.10 ကိုကျွန်တော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားနိုင်ခဲ့ရင်တောင်ကောင်းကောင်းသင်ခန်းစာကောင်းကောင်းအခုငါ Linux Mint 13 ရှိပြီ။ ဒါပြီးသွားပြီ။ ဒါပေမယ့် ၁၀.10.10 ဆိုတာဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး။
Manuel Fernandez ဟုသူကပြောသည်
Gabriel Guerrero ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းတယ်၊ အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ မင်းငါ့ကိုအများကြီးကူညီခဲ့တယ်၊ ဒီစာမျက်နှာကကောင်းတယ်
Gabriel Guerrero အားပြန်ပြောပါ
ငါလေ့လာချင်တယ်၊ windows မှ linux ubuntu သို့ပြောင်းနေသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မည်သည့်အချက်အလက်မဆိုကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်
JOSE LUIS သို့ပြန်ပြောပါ
daniel villatoro အားပြန်ပြောပါ
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ အမှန်တရားကရွှေတိုင်တစ်ခုပါပဲ Ubuntu နဲ့စတင်တဲ့လူတွေအတွက်အထူးအကြံပြုလိုတယ်
မင်္ဂလာပါ။ မင်္ဂလာပါ။ ပရိုဂရမ်ကို restart လုပ်ပြီး run သောအခါ ubuntu ကိုကျွန်ုပ် install လုပ်လိုက်သောအခါ username နှင့် password တောင်းပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်ထည့်လိုက်သောအမည်နှင့်၎င်း၏လုံခြုံစိတ်ချရသောစကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်သည် sixto@ubuntu.com: - $ ငါဘာလုပ်သလဲ
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းကို Ubuntu 12.04 ထဲထည့်လိုက်တာနဲ့အသိအမှတ်မပြုပါဘူး။
ရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါ်သောမေးခွန်းနှင့်အဖြေဝန်ဆောင်မှုအသစ်ကိုရရှိနိုင်ပါပြီ FromLinux ကိုမေးပါ။ သင်၏ပြproblemနာအားရပ်ရွာတစ်ခုလုံးကသင့်အားကူညီနိုင်ရန်အတွက်သင်သည်ဤစုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းအမျိုးအစားများကိုထိုနေရာတွင်သင်လွှဲပြောင်းပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
ရပါတယ်! ရွှင်လန်း! ရှင်ပေါလု။
Linux ပေါ်သို့ Steam ရောက်ရှိလာတော့သည်။
[အဆင်သင့် !!! ITREREYY !!!] ဟောင်းနွမ်းသောလမ်းများသို့ပြန်သွားပါ၊ ဘလော့ဂ်သည်အပြည့်အ ၀ ရွှေ့ပြောင်းသွားသည်